FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA MANCHESTER TERRIER DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary miteraka alika Manchester Terrier Dog
'Ity i Sadie, Toy Manchester Terrier. Any Angletera dia tsy ara-dalàna ny miantsona amin'ny sofina sy rambony, ka izany no antony anaovany rambony lava sy sofina floppy. '
Black sy Tan Terrier
Black sy Tan Manchester
Misy karazany roa ny Manchester Terrier: Toy sy Standard. Ny vatan'ny Manchester Terrier dia malama, matevina ary hozatra. Mafy hoditra ny loha, lava sy tery, saika fisaka somary miforitra ambony ny handrina ary fijanonan'ny hazavana izay hita rehefa mahita ny alika avy amin'ny sisiny. Lava ny lohany ary mihidy. Rehefa tazonina ho voajanahary ny sofina dia miendrika V izy, atsangana ary manana sarony aloha izay mivalona. Ao amin'ny kilalao Toy, matetika ny sofina no miarina. Rehefa voakapa izy dia lava sy maranitra. Fanamarihana: tsy ara-dalàna ny manangona sofina amin'ny ankamaroan'ny Eropa. Maizina ny maso kely, saika mainty ary miendrika almond. Mainty ny orona. Ny nify dia tokony mamorona hety na manaikitra. Ny rambony dia matevina kokoa eo am-potony ary manidina hatrany amin'ny teboka iray. Ny palitao malama, fohy ary matevina dia tery ary tonga mainty sy mainty miaraka amina teboka fanombohana sy fijanonana tsy mifangaro.
Ny Manchester Terrier dia alika avo lenta, mahery, mailaka, tena marani-tsaina ary fetsy izay mazoto mianatra. Izy io dia mampiseho ny tena toetra teriter, mahaleo tena sy mahatoky. Tena velona, ​​be fanatanjahan-tena, mailo, mailo ary mailo. Mahalala sy mahafoy tena, tsy mivadika izy ary sakaiza tsara ho an'ny tompony. Ny Manchester Terrier dia tia mampifaly ny mpikarakara azy ary mianatra vetivety. Ireo alika ireo dia mety ho miavaka amin'ny hetsika toy ny fahaiza-manao sy ny hazandrano ary azo atao tsara koa amin'ny fitsapana fankatoavana. Izy ireo dia mivelatra amin'ny fijerin'ny tompony, ary mila fitarihana avy amin'ny olony . Raha tsy misy fanatanjahan-tena, fanentanana ara-tsaina, ary / na raha avela ho mpitarika ny olombelona ny alika, dia afaka mahazo izy ireo sosotra rehefa avela irery . lasa mankaleo, hyper, manimba, ary mivongana be loatra. Ny mpitarika pack dia avela handao ny mpanaraka azy, na izany aza, tsy avela handao ireo mpitarika ny fonosana ny mpanaraka. Tena faly izy ireo miaraka amin'ny olony, ary tokony horaisina ho an'ny entana an-tongotra alohan'ny hamelana azy ireo mandritra ny fotoana maharitra hametrahana azy ireo amin'ny fomba fitsaharana voajanahary. Ny Manchester Terrier dia tokony hifaneraserana tanteraka amin'ny fahatanorany, ary ho eo akaikin'ny olona maneho fahaiza-mitarika amin'ny alika, miaraka amin'ny fitsipika, fetran'ny ary ny fetra hanarahan'ny alika, hisorohana ny herisetra mety hitranga. Mila feno ity karazany ity, fiofanana mafy orina Ny tsy fahampian'ny fitarihan'olombelona dia mety hiteraka fitakiana mafy, mafy loha, mpiaro, snappish ary / na mahery setra. Manchester Terriers dia tsy tokony hatokisana amin'ny kely hafa biby tsy kaninina , satria mahery ny fihazana fihazana ao amin'izy ireo. Tokony hampahafantarina azy ireo ny ankizy satria ny zazakely ary ny ankizy dia tokony hampianarina ny fomba fanehoana ny fitarihana amin'ny alika. Miorina tsara Manchester Terriers izay manana tompona tsy mamela azy ireo hivoatra soritr'alika kely, fitondran-tena mitaona ny olona izay inoan'ny alika fa izy dia mpitarika ho an'ny olombelona, ​​tsy haneho ireo fihetsika ratsy ireo. Raha omena izay ilainy amin'ny biby kaninina dia mpiara-miombon'antoka mahafinaritra izy ireo.
Kilalao: haavo 10 - 12 santimetatra (25 - 30 cm)
Kilalao: lanja 6 - 8 pounds (2,5 - 3,5 kg) Any Etazonia sy Kanada ny lanjany lehibe indrindra dia 5 kilao.
Standard: Haavo 15 - 16 santimetatra (39 - 40 cm)
Fenitra: lanjan'ny lanjan'ny lahy 18 kilao (8 kg) vehivavy 17 pounds (7.7 kg)
Ny tsipika sasany dia mora voan'ny aretin-dra antsoina hoe glaukoma. Ny sasany koa mora voan'ny aretim-dra antsoina hoe Von Willebrand's disease, saingy tsy fahita izany ary sitrana haingana ny ratra. Raha tavela mandritra ny fotoana maharitra ny masoandro dia mety hipoitra ny vodin-doha amin'ny lamosiny.
Alika tsara ho an'ny trano honenana ny Manchester Terrier. Mavitrika be izy ireo ao an-trano ary hanao tsara raha tsy misy tokotany. Maniry toetrandro mafana i Manchester Terriers.
Ny Manchester Terrier dia mitaky fanatanjahan-tena betsaka. Ho fanampin'ny mahazatra mandeha isan'andro , avelao hihazakazaka izy ary milalao matetika ny fehy. Ireo alika ireo dia afaka mihazakazaka haingana ary mitazona ny hafainganana mandritra ny fotoana maharitra. Ity alika ity dia tena mankafy fanatanjahan-tena amin'ny alàlan'ny fihazakazahana miaraka amin'ny bisikileta, raha toa ka miakatra tsikelikely ny habetsaky ny fanatanjahan-tena. Aza avela hiala amin'ny tadiny ity fiompiana ity raha tsy amin'ny faritra azo antoka raha tsy efa nampiofanina, satria tiany ny manenjika.
Ny palitao mainty sy maintso fohy sy mamirapiratra dia mora karakaraina, mitaky saika tsy misy fikolokoloana. Ity dia karazana fikarakarana mora. Ny Manchester Terrier dia mpandatsa salantsalany, raha ny Toy Manchester Terrier kosa mandany kely tsy misy volo. Ataovy madio ny lalan-tsofina ary ho fohy ny hoho.
Ny Manchester Terrier no karazan'aretina terrier fantatra taloha. Namboarina ho mpihaza voalavo tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo tany Manchester, Angletera avy amin'ny lehilahy iray antsoina hoe John Hulme, dia nahazo ny anaram-bosotra hoe 'rat terrier' noho ny fahaizany mamikitra voalavo sy totozy. Izy io dia heverina ho karazana fihazana hena tsara indrindra. Tamin'ny fifaninanana britanika iray, Manchester iray antsoina hoe Billy dia voalaza fa namono voalavo 100 tao anatin'ny 6 minitra sy 13 segondra fotsiny. Ny Manchester Terrier dia novolavolaina tamin'ny fiampitana ny Black sy Tan Terrier ary ny Whippet . Misy karazany roa ny Manchester Terrier: Standard sy Toy. Ny karazana Toy dia nanjary nalaza nandritra ny fanjakan'ny Mpanjakavavy Victoria, rehefa tena malaza ny alika kely kokoa. Ny Standard Manchester dia mbola mitazona ny fahafaha-manao «ratter», fa ny karazany kosa dia alika mpiara-miasa. Nidina nalaza ny Manchester Terrier. Ny Manchester Terrier dia nampiasaina tamin'ny fampivoarana karazana maro, anisan'izany ny Doberman Pinscher , ary ny Airedale Terrier .
pitbulls fotsy misy teboka volontany
Terrier, AKC Terrier Ny karazana kilalao dia AKC Toy.
Starlette the Toy Manchester Terrier amin'ny 2 taona
Sadie the Toy Manchester Terrier miaraka amina rambony tsy voahidy sy taona tsy voapaika
'Ity no lalaoviko Manchester Terrier Starlette. Tiany ny manohy mandeha sy mihazakazaka isan'andro , kokoa noho ny leash. Namono biby kely maromaro izy, anisan'izany ny a bitro , vorona , ary voalavo . Tiany manafika sy milalao ao anaty trano. Fantany ny tetika maro, anisan'izany ny paozy alika any ambany, dihy ballerina, dimy taona ary 'midina ambany' (mandihy amin'ny hira Flo Rida), miampy ireo rehetra baiko fototra . Tiany ny mitaingina fiara na dia mamindra ny fiara mankamin'ny lalan-kely mankany amin'ny garazy fotsiny aza izy. Tsy tiany mihitsy ny andro mangatsiaka! Matory eo am-pandriany izy miaraka amin'ny lamba firakotra volon'ondry sy lamba fanamainana, fa mazàna dia mikambana amin'ny tompony ao ambanin'ny fonony amin'ny misasakalina. Matetika manao akanjo koa izy, izay manampy anao hitafy satria fantany fa manafana azy foana izy ireo. Mandro arak'izay tratry ny heriny izy, eny fa na dia eo amoron-drano miaraka amin'ny reniny aza. Izy foana no tianao indrindra na aiza na aiza alehany, indrindra rehefa manomboka manao fikafika izy. '
Starlette the Toy Manchester Terrier amin'ny taona 2 mihinana sombin-kena
Ity dia Am / Can. Ch. Wilane's Millennia, sary natolotr'i Wilane Kennels Standard Manchester Terriers
Manchester Terrier olon-dehibe tamina fampisehoana alika
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Manchester Terrier
Manchester Terrier Sary 1
Aostraliana kely mpiandry Chihuahua afangaro
kankana kasety amin'ny sary alika
ny fomba fihazonana kisoa kibo vilany kely
mifangaro pitbull boxe mainty sy fotsy